Obama lauds Zimbabwe's premier, faults Mugabe
President Obama praised Zimbabwe's prime minister Friday for his tenacity in trying to lead the beleaguered nation out of a "very dark and difficult period." He chided Zimbabwe's hard-line president, Robert Mugabe, for opposing freedoms.
"Overall, in a very difficult circumstance, we've seen progress from the prime minister. We are grateful to him," Obama said in the Oval Office alongside Morgan Tsvangirai after their private meeting.
In an unusual arrangement, Tsvangirai is sharing power with Mugabe, who has been accused of stealing an election from Tsvangirai and orchestrating widespread violence. After years of dogged opposition that involved suffering death threats, arrests and beatings, Tsvangirai is now trying to change Zimbabwe's government from the inside.
Obama said the United States is trying to encourage human rights and the rule of law in Zimbabwe along with other basics of society: working schools, health care and an agricultural system that can help the country feed its people.